Akwụkwọ Jayson DeMers na Martech Zone |
Edemede site na Jayson DeMers
Yabụ na ị bụ onye egwu na-achọ ịme nkwupụta na ntanetị ma ị na-eche echiche ime ka usoro njikarịcha search engine (SEO) rụọ ọrụ maka gị? Ọ bụrụ na nke ahụ bụ ikpe, yabụ dụrụ gị ọdụ na, ebe enweghị mgbagha anwansi na njikarịcha njin ọchụchọ, ọ gaghịkwa esiri gị ike melite ọhụhụ ọchụchọ gị n'ime Google na Bing. Nke a bụ usoro SEO dị mma maka ndị na-egwu egwu iji melite ọhụhụ njin ọchụchọ. 1. gingde blọgụ ịde blọgụ bụ ụzọ dị mma
Ihe ngwanrọ ngwanrọ arụpụtara nke ọma (BI) bụ ihe dị oke mkpa maka nzukọ ọ bụla chọrọ ịchọpụta ROI nke ọrụ ha n'ịntanetị. Ma ọ bụ nsuso oru ngo, ozi ịre ahịa email, ma ọ bụ ịkọ amụma, ụlọ ọrụ enweghị ike ịba ụba na-enweghị nsuso mpaghara nke uto na ohere site na ịkọ akụkọ. Ngwunye ngwanrọ ga-ewe oge na ego naanị ma ọ bụrụ na enwetaghị snapshots ziri ezi nke otu azụmahịa si eme. Lelee ihe isii ndị a iji dobe otu
N'ime oge, SEO na-esiwanye ike ma sie ike karị, mana nke ahụ ọ ga-abụrịrị na ọ dị oke ọnụ? Ọ bụghị ụlọ ọrụ niile chọrọ ọrụ SEO sitere na Ntanetị ma ọ bụ metụtara IT. N'ezie, ihe ka n'ọnụ ọgụgụ bụ obere ụlọ ọrụ ndị na-elekọta otu mpaghara ala. Ndị folks a chọrọ SEO mpaghara karịa ọdịnala, mba SEO. Ulo oru di iche-iche di iche-iche na ndi mmadu - ndi eze, ndi ulo nkpo, ulo ahia, ulo ahia - enweghi ezigbo mkpa itinye aka na nyocha nke uwa
Ọrụ kachasị mma nke ndị ahịa chọrọ ọtụtụ ihe karịa ịmụmụ ọnụ ọchị, ọ bụ ezie na nke ahụ bụ ezigbo mmalite. Ndị ahịa nwere obi ụtọ na-eduga ịmegharị azụmahịa, ịbawanye nyocha dị mma (nke na-eme ka SEO dịkwuo elu), yana mmụba mmekọrịta mmadụ na ibe ya nwere mmetụta ziri ezi (nke na-ebu ụzọ mee ka visibiliti nyocha ọ bụla), ọ nweghị ụlọ ọrụ nwere ike ịdị na-enweghị ndị ahịa ha. Ndị a bụ ụzọ ise dị mfe iji hụ na ndị ahịa gị na-eche na ha hụrụ gị n'anya. 1. Jụọ Ajụjụ Ndị Kwesịrị Ekwesị companylọ ọrụ ọ bụla kwesịrị ịjụ ajụjụ a kwa ụbọchị: Gịnị
Mepụta uzu gburugburu azụmahịa ma mee ka ndị na-ege gị ntị nwere mmasị na ngwaahịa ma ọ bụ ọrụ gị bụ nzọụkwụ mbụ iji wuo obodo na-eguzosi ike n'ihe. N'ime oge dị mkpirikpi, nke a nwere ike ibute ụba ahịa na ahịa. N'ime ogologo oge, nke a nwere ike ịmepụta otu ndị nnọchi anya ndị nnọchi anya ọrụ nke na-arụ ọrụ dị ka otu ndị ahịa ahịa ahịa okpuru. Ebe ọ bụ na imeri obi nke igwe mmadụ gị dabere na itinye aka na ndị na-ege ntị, ọ dị mkpa iji ya